जुम्ल्याहा नानीलाई बोक्दा शिशिरको आँखाभरी आँ’शु ! शिशिरलाई पर्यो अफ्ठेरो (भिडियो)
रामेछापका बाबु तामाँगले प्रेम बिवाह गरे । सबिना तामाँगला’ई आफ्नो धर्मपत्नी बनाएपछि ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने यि दुई निकै खुशी थिए । त्यसैबि’च सन्तानको रुपमा दुई जुम्ल्याहा छोरीहरुको जन्म हुँदा खुशी डबल भयो । तर उनीहरुको खुशी दैवले देखि सहेनन् । जुम्ल्याहा छोरीहरु जन्माएको ११ दिनमा आमा”को मृ’त्यु भएपछि समस्या झनै बढ्यो ।
ऋण गरेर हस्पिटलको खर्च तिरेका बाबुसँ’ग छोरीहरुलाई दुध र औषधी खुवाउने पैसा पनि भएन । काठमाडौंको बौद्धमा कोठा भाडामा बस्ने बाबु र उनका छोरीहरुको बारेमा छिमेकी’ले थाहा पाए र आफुले सक्ने सहयोग गरे । सहयोग धेरै नै आवश्यक परेपछि एक छिमेकीले कलाकार तथा समाजसेवी शिशिर भण्डारीलाई फोन गरे । शिशि’र तुरुन्तै त्यहाँ पुगे र जुम्ल्याहा नानीहरुको हृदयस्प’र्शी भिडि’यो बनाए ।
भिडियो भा’ईरल भयो । शिशिरलाई सहयोगी’हरुको देश तथा बिदेशबाट फोन आउन थाल्यो । लकडाउनमा काठ’माडौं भित्र शिशिर आफै डुलेर सहयोग उठाए । बिदेशबाट पनि सहयो’गीह्रुले सहयोग जारी राखे । आमा गुमाएका जुम्ल्या’हालाई अन्तिम पटक बोक्दै शिशिर भण्डारी रोए । आफ्नै छोरीहरु जस्तै लाग्छ भन्दा मन भक्का’नियो ! भिडि’यो हेर्नुसः
Prevरुकुम घटना: बुवाआमाले आफ्नै छोराको किरिया गर्न पाएनन्, घरबेटीले कोठाबाट निकालि दिए (भिडियोसहित)
Nextहसिँया लागेर भागेका नवराजका साथी भन्छन् ‘नभागेको भए हामी सबैलाई मा’र्ने रहेछन्’ (भिडियोसहित)
घरमानै यसरी मनाए सेलिब्रेटीहरूले होली [ हेर्नुहोस् फोटो फिचर]
टिकटकमा भाईरल बनेकी बेहुली श्रीमानसँगै मिडियामा (भिडियो सहित)